Red Hat yakaburitsa kodhi yekodhi yeRed Hat Bugzilla, chishandiso chekutsvagisa bug | Linux Vakapindwa muropa
Red Hat yakaburitsa kodhi yekodhi yeRed Hat Bugzilla, chishandiso chekutsvagisa bug
Darkcrizt | | Noticias, Free Software
Red Hat yakavhurwa nekutumira iyo sosi kodhi yekudzokorora kwako kweRed Hat Bugzilla system, zvinova forogo yemukati yeRed Hat kubva kuBugzilla iyo inoshandiswa kuchengetedza dhatabhesi yezvikanganiso, kuongorora kururamisa kwavo uye kuronga kuisirwa kwehunyanzvi.
kunze kwaizvozvo inokutendera iwe kuronga software kutadza munzira dzakawanda, Kubvumira iyo kutevera akawanda chigadzirwas nemhando dzakasiyana uyezve dzakasanganiswa nezvakawanda zvikamu. Izvo zvakare zvinokutendera iwe kupatsanura software kuremara zvinoenderana nekwavo kwekutanga uye kuomarara, pamwe nekuvapa iwo mavhezheni emhinduro yavo.
Iyo zvakare inobvumidza kuwedzera makomendi, mhinduro dzemhinduro, kugadza mamaneja kuti ape resolution uye mhando yemhinduro yakashandiswa kuchikanganiso, zvese izvi zvekutarisa mazuva ayo chiitiko chimwe nechimwe chinoitika uye, kana chakagadziriswa nenzira kwayo, kutumira maemail kune avo kufarira kukanganisa.
1 Nezve Red Hat Bugzilla
1.1 Red Hat Bugzilla ikozvino yakavhurwa sosi
Nezve Red Hat Bugzilla
Iyo Red Hat Bugzilla kodhi yakanyorwa muPerl uye inogoverwa pasi pemahara rezinesi reMPL. Iwo makuru mapurojekiti anoshandisa Bugzilla ndiMozilla, Red Hat, uye SUSE. Red Hat inoshandisa iro bazi RHBZ (Tsvuku Hat Bugzilla) mune zvivakwa zvayo, zvinowedzeredzwa nezvinhu zvemberi uye zvakashandurwa kune chaiwo ekuvandudza paRed Hat.
Tsvuku Hat Bugzilla yakagadziridzwa kubvira 1998, asi kusvika parizvino kuvandudzwa kwayo kwakaitwa kuseri kwemikova yakavharwa, pasina kushambadza nhoroondo yeshanduko uye pasina kupa mukana kunzvimbo yekuchengetedza nekuda kwekuvapo kweruzivo rwekuvanzika mune metadata.
Zvekugadzirwa kwetafura, raibhurari yeDataTables inoshandiswa, kugadzira madhayagiramu mumishumo yePlotylyJS, kuronga basa rema dialog nemafomu, kusarudza uye kubata Font Awesome Mahara mafonti.
Vaparidzi vanoshandisa zvakare iyo Bugzilla yekuwedzera kubva kuBayoteerssenge BayotBase, AgileTools, uye TreeViewPlus kuratidza ruzivo rwekuvimbika uye kubata basa reboka.
Yekutanga Bugzilla kodhi base yakangobva kuganhurirwa kungogadzirisa chete Iyo chirongwa chekugadzirisa patsva iyo Bugzilla interface, yakatanga makore akati wandei apfuura, yakasiiwa kweinopfuura gore. Chiitiko chikuru chave kuitiswa munzvimbo yekuchengetera nebazi reMozilla, iro rinoramba richikurumidza kukura.
Red Hat Bugzilla ikozvino yakavhurwa sosi
Iye zvino RHBZ yakashandurwa kuita yakamira yakavhurwa sosi purojekiti, ine kodhi yakavhurika zvachose pasi peMPL-2.0 rezinesi uye inowanikwa kwekunze kwekushandisa.
Sehwaro, RHBZ yakashandisa iyo yazvino Bugzilla sosi yemuti, iyo ma plugins anodiwa akatsigirwa. Nekuda kwekuvapo kweyakavanzika dhata mune zvinyorwa zvekuzvipira, iyo yakavhurwa vhezheni yeRHBZ se inodhinda sehombodo hombe ye1174 yakachinja mafaera, 274307 mitsara yakawedzerwa uye mitsara 54053 yakabviswa kumusoro kweBugzilla 5.0.4 masosi.
RHBZ yakatanga seforogo yemukati yeRed Hat mu1998 uye yakaitika shanduko zhinji mumakumi maviri emakore anotevera. Nhoroondo yekusimbisa haigone kuitwa pachena sezvo meseji yekusimbisa uye ruzivo rwe meta hune data rakaomarara.
Iyo kodhi yacho pachayo inogona kuburitswa neruzhinji, asi nekuda kwechikonzero chiri pamusoro ingori yeimwe-nguva kuzvipira kumusoro kweBugzilla kodhi. Red Hat inochengeta yemukati kopi yesosi nenhoroondo.
Kune avo vanoda tsananguro yeiyi kana imwe shanduko, vanokurudzira kubata vashandi veRed Hat.
Pamusoro peiyo yekutanga Bugzilla kodhi kodhi, RHBZ zvakare inoshandisa zvinhu kubva kubazi rinoenderana nezvivakwa zveMozilla.
Pakupedzisira kune avo vanofarira kuziva zvakawanda nezvazvo nezve Red Hat Bugzilla kodhi kuburitswa uye / kana vanofarira kuongorora kodhi yekodhi kana kuwana kopi yacho, unogona kutarisa ruzivo uye nekodhi kodhi Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Red Hat yakaburitsa kodhi yekodhi yeRed Hat Bugzilla, chishandiso chekutsvagisa bug
DXVK 1.7 inosvika pamwe nekuvandudzwa kweVulkan, optimizations uye nezvimwe
Iwo mamaneja emukati. Tsananguro pfupi